यस्तो छ रियाको जे’ल दैनिकी, शौचालयको लाइनदेखि खानासम्म… – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/यस्तो छ रियाको जे’ल दैनिकी, शौचालयको लाइनदेखि खानासम्म…
सुशान्त सिंह राजपुत आत्मह’त्या प्रकरणमा अगाडि आएको ड्र’ग्स लेनदेन तथा प्रयोगको आ’रोपमा नायिका रिया चक्रवर्ती हि’रासतमा छिन्। रिया चक्रवर्ती मृ’तक सुशान्त सिंहकी कथित प्रेमिका हुन्। यसअघि एनसिबी ले नै रियाका भाइ सौबिकलाई पनि प’क्राउ गरेको हो। रिया र सौबिकमाथि ड्र’ग ओसारपसार तथा सेवनको आ’रोप छ। रिया चक्रवर्तीलाई मुम्बईको बाइकुला जे’लमा राखिएको छ।
रिया चक्रवर्ती अब बाइकुला जे’लको मेम्बर बनिसकेकी छन्। कोरोनाको कारणले उनलाई को’र्टमा पेश गरिएको छैन। त्यसैले रियाले पूरा समय जे’लमा नै ब’स्नुपरेको छ। जे’लमा रियाको दैनिकी कसरी बित्छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म के के हुन्छ यहाँ? यो सबैको चासोको विषय हो। यहाँ हामीले बाइकुला जे’लको भित्री क’हानी के कस्तो छ, भन्ने बारेमा केही जानकारी दिने कोसिस गरेका छौँ।
१. बिहानै ६ बजे जेलको घण्टी बज्नेबित्तिकै सबैजना उठ्नुपर्छ। जे’लमा घरमाजसरी आधा दिनसम्म सु’त्न पाइँदैन।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
२. उठिसकेपछि निश्चित समयमा हातमुख धुने, ब्रस गर्ने र शौ’चालयको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ८ बजिसकेपछि खाजा पाइँदैन।
३. जे’लको मेसमा खाजाको लागि लाइन बस्नुपर्छ। आफ्नो पालोमा आफ्नो भाँडोमा चिया र पोहा या उत्पम दिइन्छ।
४. २ देखि ३ बजेको बीचमा मेसमा नै लञ्च दिइन्छ। यतिबेला पनि आफ्नो आफ्नो भाँडो लिएर खानाको लागि लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ। जे’लको लञ्चमा दाल, भात, रोटी अनि आलुको तरकारी दिइन्छ।
५. जे’लमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अचार बनाउने, पीठो मुछ्ने, सरसफाइ गर्ने, काठ काट्ने आदि काम गर्नुपर्छ। रिया हाल जुडिसल कस्टडीमा रहेकिले उनले हाल कुनै काम गर्नु पर्दैन।
रियाको हालको रुटिन आफ्नो ब्यारेकमा खाजा र खानापछि फर्समा बसेर, पल्टेर आराम गर्ने मात्र हो। को’र्टले स’जाय सुनाएमा रियाको दैनिकी बदलिने छ।
६. लञ्चपछि साँझ कै’दीहरूलाई जे’लको हाताभित्र घुम्न, रमाइलो गर्न र आ’पसमा कु’राकानी गर्न छु’ट दिइन्छ। तर त्यस दौ’रान ख’तरनाक कै’दीहरूलाई ब्या’रेकभित्र नै राखिन्छ। स्रोतअनुसार, हाल रिया आफ्नो ब्यारेकमा नै दिउँसोको समय आफ्नो ख्याल राखेर बिताउँदै छिन्।
७. लञ्चपछि रातमा डिनरको पालो आउँछ। डिनरमा पनि लञ्चकै जस्तो मेन्यु रिपिट हुन्छ।
मीठो खाना खाने बानी परेकी रियालाई जे’लको खाना खानु र त्यो जीवन जीउनु कुनै नमीठो स’पनाभन्दा कम छैन। जे’लको अर्को सबैभन्दा न’राम्रो कुरा हो शौ’चालय। जे’लको शौ’चालय यति धेरै फ़ोहोर र घि’नलाग्दो हुन्छ कि, भनिन्छ, कतिपय मानिसले त शौ’चालय प्रयोग गर्न नपरोस भनेर खानासमेत खाँदैनन्।
रिया बसेको बाइकुला जे’लमा अधिकतम केटीहरू नै छन्। ठूलाठूला अ’पराध गरेकाहरू पनि यस जे’लमा रहेको बताइन्छ। हाल रियालाई बाइकुला जे’लको ग्राउन्ड फ्लोर ब्यारेक नं १ मा राखिएको छ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अमेरिकामा एकै दिन १९ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, संक्रमितको संख्या चार लाख नाघ्यो